विश्वलाई ज्ञान सिकाउने प्राध्यापकहरुको लोकतान्त्रिक इज्जतमा कालो ‘दाग’, रामेश्वरलाई चाहियो स्वतः बढुवा !
निर्माण सञ्चार, काठमाडौं । विश्वलाई ज्ञानगुन दिने केन्द्रलाई आधुनिक संसारमा विश्वविद्यलायका नामले चिनिन्छ ।
तर, यस्ता विश्वविद्यालय भित्र लोकतान्त्रिक आचारण पनि विश्वले मान्न लायकै होला भन्ने यदि तपाई ठान्नुहुन्छ भने त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत रहेको प्रध्यापक संघको वर्तमान हेर्नुहुन्छ भने लाजैमर्दाे पाउनु हुन्छ ।
प्रध्यापक संघ पेशागत प्रध्यापकहरुको साझा संस्था हो । निर्वाचन (लोकतान्त्रिक पद्धति) द्वारा ३ वर्षका लागि चयन हुने उक्त सम्मानित शैक्षिक निकायको लोकतन्त्र भने अलोकतान्त्रिक रहेको छ ।
इतिहासमै ‘कालो दाग’ लाग्ने गरी वैधानिकता बेगर नै प्राध्यापक जस्तो गरिमामय पेशाको हित संस्थाको ‘बासी पद’ लिएर बस्नेलाई लाज नलागेको देख्दा, ... केलाई भन्दा हेर्नेलाई लाज’ भने जस्तै भएको बताउँछन् त्रिवि केन्द्रीय विश्वविद्यालयमा अध्यापन गर्ने प्राध्यापकहरु ।
अचम्म लाग्दो कुरा के छ भने, कुनै दिन देशको निरंकुशता विरुद्ध लड्न सिकाउनेहरु अर्थात् प्राध्यापकहरुकै अन्त्यहीन सहनशीलता हेर्दा, त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत देशैभर रहेका प्राध्यापकहरुलाई के भन्न सकिएला ? भनिन्छ ‘अपराध गर्ने भन्दा गराउने बढी दोषी हुन्छ’ ।
घूस लिने घटनामा दिनेलाई पनि कम दोषी मान्न नमिल्ने अपराध शास्त्रको भनाइ छ । आफ्नो वैधानिक संस्था अवैध रुपमा वर्षौं चलिरहँदा पनि मौन बस्ने प्राध्यापक ‘गुरु’हरुलाई कस्ले के भन्ने ?
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनको आन्दोलन
तर, अति भएपछि खति निम्तन्छ भनेझैं युगौं एउटै पदमा आसीन हुन चाहनेले आफ्नो काल आफैंले रोपेको ठहर गर्दै नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठन र नेपाल राष्ट्रिय प्राध्यापक संगठनले यस विरुद्ध आमने सामने भिडन्त गर्ने निर्णय गरेको एक प्राध्यापक नेताले जानकारी दिए ।
उपकुलपतिलाई सम्बोधन गर्दै उक्त दुवै संगठनहरुले सोमबार विश्वविद्यालय समक्ष ७ सूत्रीय माग पत्र पेस गरेका छन् । उनीहरुले त्रिवि भित्र प्राध्यापकीय पेसाको गरिमा माथि नै प्रश्न चिह्न उठ्ने गरी भएका विकृति विसंगति विरुद्ध सशक्त आन्दोलन गर्ने बताएका छन् ।
आन्दोलनले के गर्दैछ ?
रोचक कुरा के छ भने, नेपाली काँग्रेस निकट हरेक प्राध्यापकहरु आफूलाई ‘प्रजातन्त्रवादी’ बताएर थाक्दैनन्, तर उनीहरुले नेतृत्व गरेको मोर्चामा भने प्रजातन्त्रको खिल्ली नै उडाउने गरेको पाइएको छ ।
३ बर्से कार्यकाललाई एक कार्यकाल थप गरेर अर्काे २ वर्ष ‘अवैध’ हुँदा पनि हाइसन्चो मानिरहेका वर्तमान ‘सभापति’ योगेन्द्र नारायण बर्बरियाका रोचक कहानीहरु यो ‘अवैधता’ भित्र लुकेका छन् ।
उनी आफू रिटार्यड नहुँदासम्म नै प्राध्यपाक संघको निर्वाचन नगराउने दाउमा रहेको संघकै एक सदस्यको आलोचना छ । अब उनी डेढ वर्ष पछि पेसा निवृत्त हुँदै छन् ।
तर, यो अवधिभित्र उनको जागिरे जीवनले बोकेको ‘अवैध गर्भ’ले उनको छविमाथि नै नकारात्मक छाप परेको छ । उनी जब प्राध्यापकको नेता भए, सभापति भएपछि आफ्नो क्याम्पस सिरहाबाट उनी केन्द्रतिर आए ।
सरकारी नियम अनुसार यसरी बस्दा काज वा कुनै कानुनी नियम अनुसार पेसामा खट्नु पर्ने मर्यादा भित्र पर्ने अन्य प्राध्यापक जस्तै एक प्राध्यापक हुन् ।
तर, उनी कार्यरत क्याम्पसको दैनिक हाजिरी कापीमा भने उनको नाउँमा ६०७ दिन हाजिर गयल छ ।
यस्तो गयल प्राध्यापकले उक्त अनधीकृत हाजिर प्रमाणित नहुँदासम्म प्राध्यापक संघको उच्चतम पद नछाड्ने सोच बनाएका हुन् ।
हाजिर वैध गराउन विश्वविद्यालय सभामाथि नै हर्कत
अझै रोचक कुरा के छ भने, उनले आफ्नो हाजिरलाई वैधता नदिए ‘जे पनि गर्ने’ हर्कत गरेपछि यस अघिको त्रिवि सभामा कुलपति रहेका प्रधानमन्त्री नै गएनन् ।
त्रिवि नियमावली अनुसार कुनै पनि प्रध्यापक विना सूचना ९० दिन ‘गयल’ बस्छ भने उसको जागिर नै चेट हुने बताउँछ ।
तर, उनको शक्ति र पहुँचको दबदबा खेप्न बाध्य त्रिवि पदाधिकारीहरु उनका अगाडि ‘राजाका मुख्यान्जे ... दुहाई’ भनेझैं छन् । हजार फँडा भएको नागको आशनमाथि ‘गुरु गोरखनाथ’ भएर रहन सफल छन् उनी अझै पनि ।
प्राध्यापकका अर्का ‘नेता’ स्वतः बढुवाको लाइसेन्स नपाएसम्म कुर्ची नछाड्ने !
प्राध्यापकहरुले जोगाउन नसकेको ‘गरिमा’ बारे लेखिसाध्य छैन ।
नेपाल प्राध्यापक संघको गत ०७२ असोज १९ गते नै सकिएको थियो समयावधि । तैपनि ‘डेट स्पाएर’ औषधी पनि ‘प्रेस्क्राइब्ड’ गर्ने नेपालमा प्राध्यापक संघ होस् कि अरुमा, यस्तै चलनले ‘वैधानिकता’ पाउँदै गएको छ ।
अध्यक्ष रामेश्वर उपाध्यायले यस्तै माग गरेर बसेकोमा सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी निकट प्राध्यापक संगठनहरुले आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।
पेसामा छिरेदेखि अहिलेसम्म उपप्राध्यापक रहेका उनी आफ्नो स्वतः बढुवाको माग गरिरहेका छन्, जुन कुराले जग हाँसेको बताउँछन् एक प्राध्यापक ।
उनको पनि अब डेढ वर्ष बाँकी छ रिटायर्ड जीवनमा फर्कन ।
साउन ५ को सिनेटमा के होला ?
यसैबीच आउने साउन ५ गते त्रिवि सिनेट बस्दैछ । उक्त सभामा फेरि पनि आफ्नो अवैध हाजिरीलाई वैधता दिलाउन संघका नेताले पदाधिकारी माथि दबाब हालिरहेका छन् ।
जस्तो कि उनले विगतमा पनि गर्दै आए ।
नेपाल प्रगतिशील प्राध्यापक संगठनले भने सो सभामा प्राध्यापक संघको नेताको हैसियतले आसन ग्रहण पनि नगराउनू भन्ने माग राखेको बताउँछन् सचिव दिलनाथ दंगाल ।
यस्तो छ माग पत्र
मंगलबार, २६ असार, ०७५